प्राइम कमर्सियल बैंकका कर्मचारीको तलबभन्दा बोनस धेरै ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > प्राइम कमर्सियल बैंकका कर्मचारीको तलबभन्दा बोनस धेरै !
प्राइम कमर्सियल बैंकका कर्मचारीको तलबभन्दा बोनस धेरै !
काठमाडौं । लाभांश धेरै दिनसक्नेगरि काम गर्न सेयरधनीले प्राइम कमर्सियल बैंकको व्यवस्थापनलाई सुझाव दिएका छन् । बैंकको शुक्रवार भएको १२ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्ने सेयरधनीले आगामी वर्षमा पनि अझ धेरै लाभांश बढ्ने काम गर्नुपर्ने बताए ।
कैलाश विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने विशेष प्रस्ताव गरेको प्राइम बैंकलाई अझै अर्को राम्रो बैंक मर्ज गर्न सेयरधनीहरूले सुझाए । हरेक वर्ष बोनस सेयर प्रदान गर्दै आएको प्राइमलाई आगामी दिनमा पनि बोनस शेयर वितरण गरिरहन उनीहरुको आग्रह थियो । साधारणसभाले चुक्ता पुँजीको १६ प्रतिशत बोनस सेयर पारित गरेको छ ।
बैंकको हालको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ छ। कन्काइ विकास बैंक प्राप्तिपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ पुग्नेछ । बैंकले यसै पुँजीमा १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
कैलाश विकास बैंकलाई प्राप्ति गरि बोनस सेयर वितरणपछि चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ पुग्नेछ । गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरूका लागि ८८ करोड ८३ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले बोनसबाहेक तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा वापत एक करोड ९ लाख रूपैयाँ बुझेका छन् ।
त्यस्तै अन्य विशिष्ट पदाधिकारीले बोनसबाहेक एक करोड २३ लाख रूपैयाँ बुझेका छन । कर्मचारीहरूले तलबमात्रै २१ करोड ७६ लाख रूपैयाँ बुझ्दा बोनस भने ३४ करोड ९९ लाख रूपैयाँ पाएका छन् । कर्मचारीहरूले तलबभन्दा अन्य सुविधा तथा बोनस धेरै प्राप्त गरेका छन् ।
२०७६ पुस २५ गते प्रकाशित
२०७६ पौष २५ गते १३:०६ मा प्रकाशित
नवनियुक्त अध्यक्ष ढुङ्गानाले गरे पदभार ग्रहण